Roberto Firmino iyo Sadio Mane oo laga yaabo inay heshiis Cusub u Saxiixin Liverpool | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Roberto Firmino iyo Sadio Mane oo laga yaabo inay heshiis Cusub u...
Roberto Firmino iyo Sadio Mane oo laga yaabo inay heshiis Cusub u Saxiixin Liverpool
Mustaqbalka labada ciyaaryahan ee Liverpool Roberto Firmino iyo Sadio Mane ayaa lagu soo waramayaa inaan la hubin marka uu dhamaado qandaraasyada ay haatan kula jiraan.
Labada ciyaaryahan ayaa lagu wadaa inay arkaan heshiisyadooda haatan xagaaga 2023, sidoo kale weeraryahanka kale ee Mohamed Salah ayaa isna shaki ku jiraa .
Inta badan kooxda waxay xooga saareysaa Salah, kaasoo lagu soo waramayo inuu diidan yahay inuu ka tago mushaarkiisa, laakiin Firmino iyo Mane ayaa sidoo kale laga yaabaa inay kooxda ka tagaan 18 bilood gudahood.
The Athletic ayaa sheegeysa in Liverpool aysan wali go’aansanin inay labada ciyaaryahan u soo bandhigaan heshiisyo dheeri ah iyo in kale, halka ciyaartoyda laftooda ay diidi karaan dalab kasta haddii ay yimaadaan.
Labada ciyaaryahan ayaa 31 jir noqon doona marka uu qandaraaskooda haatan dhamaado, Liverpool ayaana si isa soo tareysa loola xiriirinayaa weeraryahanada da’da yar si ay u bedelaan seddexda hore ee weerarka.
Barcelona ayaa lagu qiimeeyay xiisaha ay u qabto Firmino hadii ay Liverpool go’aansato in ay lacag kaash ah ku hesho xiddiga reer Brazil ka hor inta uuna dhamaan heshiiskiisa inkasta oo ayna jirin fursad uu heshiis ku dhaco January.
Firmino iyo Mane ayaa Liverpool u saftay 553 kulan, iyagoo u dhaliyay 201 gool, caawiyeyna 116 kale.
Daafaca kooxda Arsenal Ben White oo laga saaray xulka qaranka England
Daafaca kooxda Arsenal Ben White ayaa laga saaray xulka qaranka England ee xagaagan sababo la xiriira dhaawac. 24-sano jirkaan oo afar jeer u saftay xulkiisa ayaa lagu waday...
Bruno Fernandes oo Xulkiisa Portugal ka Caawiyay u soo bixitaanka Koobka...
Doorashada Guddoonka Aqalka Sare oo lasoo geba-gebeeyey – Yaa kusoo baxay?
Aadan Madoobe oo amar ku saabsan amniga doorashada siiyay saraakiisha ATMIS
Guddiga Doorashooyinka oo shaaciyey in lagala wareegay Barihii Bulshada